ကလေးများအတွက်နှင်းခူ | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
နှင်းခူ Palliative အစီအမံ
ဒါဟာသင်ခြစ်ရာ, itches ။ ဒါဟာသင် ပို. ပင်ခြစ်ရာ, တဖနျ itches ။ နောက်ဆုံးတော့အချိန်အထိအရာအားလုံးအနာများနှင့်သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သို့ပင်အရွယ်ရောက်သူအဘို့ခက်ခဲသည်ကလေးများအတွက်မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်ဖြစ်သည်: ပေါ်ကနေအရေပြားရောင်ရမ်း၌ဤမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ယားယံကစတင်ခဲ့သည်သောအခါအကုပ်ခြစ်ကိုရပ်တန့်။
15 န်းကျင်အားလုံးသားသမီးများ၏% အများဆုံးဖြစ်ပွားမှု၌ဤရောဂါ, အရွယ်ရောက်ပြီးသူရှားပါးကြောင့်ထိခိုက်နေကြသည်။ ပေါ်ကနေအရေပြားရောင်ရမ်းတွင် - လည်းပေါ်ကနေနှင်းခူကိုခေါ် - ဆိုးဆိုးရွားရွား itches ကြောင့်ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေနှင့်အတူဒွန်တွဲနေတဲ့အရေပြားအဖု, ဖြစ်ပေါ်လာသော။
ဘယ်လို behaldet နှင်းခူကလေးငယ်များအတွက်
ရောဂါပစ္စုပ္ပန်ရှိမရှိ, အရေပြားတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးရောဂါအနည်းဆုံး33 အဓိကစံနှုန်းများနှင့်အလယ်တန်းစံတွေ့ဆုံရန်မျှမျှတတလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်း၏, ဆေးသမား၏အကြံပေးချက်ကိုမဆိုအမှု၌ဆည်းကပ်ရပါမည်!
ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူး (တံတောင်ဆစ်ချိုး, ဒူး, လည်ပင်း, ဝမ်းဗိုက်)
မိသားစုမှာပေါ်ကနေ Erkan Kung-(ပန်းနာရောဂါ, ဓာတ်မတည်, နှင်းခူ)
သငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျအပေါငျးတို့သရောဂါများဤနေ့နှင့်အသက်အရွယ်အတွက်ကိုစဉ်းစားမယ်လို့ - အပြည့်အဝအကြောင်းကြားခံရဖို့ - အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောလူသိများတဲ့ရောဂါများ။ ကံမကောင်းစွာပဲလူများစွာအဘို့, ကံမကောင်း, ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ , မတူဘဲသငျသညျဆိုသညျကားနိုင်သည့်အတွက်ဥပမာတစ်ခုတိရိစ္ဆာန် dander, "သင့်ကလေးကိုမြင်းများမှမတည့်ဖြစ်ပြီး"ဒီအကြောင်းမရှိစေ့စပ်ထွက်ရှာတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ဤသည်လူနာတစ်ဦးထပ်တိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုအစပျိုးခြင်းနှင့်အချက်များဟုခေါ်သည်။ ရောဂါကုသရန်ကရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာဖို့မကူညီဘူး, ဒါပေမယ့်အဓိကအကြောင်းတရားများဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ strain (ဥပမာ, စိတ်ကျရောဂါ)
မည်သည့်ပုံစံ (ဥပမာတိရိစ္ဆာန်ဆံပင်, Polle-, အိမ်သူအိမ်သားဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်အစားအစာဓာတ်မတည်) ၏ဓာတ်မတည်
သငျသညျအခြို့သောဥပမာ၏အခြေခံပေါ်မှာတွေ့မြင်: ဖြစ်နိုင်ချေအကြောင်းပြချက်ထူးထူးအပြားပြားဖြစ်ကြ၏။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအထောက်အကူဖြစ်စေ "ဖြစ်ပါတယ်ရောဂါဒိုင်ယာရီ"ဦးတည်သွားစေရန်။ သငျသညျမှစားရသို့မဟုတ်ခံစားခဲ့ရသည့်ရက်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာစေ့စပ်ခြင်းရှိကြလော့။
အနည်းငယ်သောအစွန်အဖျား: တစ်ဦးက "ဒီရောဂါဒိုင်ယာရီ" ဒီလိုဝက်ခြံကဲ့သို့အခြားရောဂါများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကနေ, ကအဖြစ်ကောင်းစွာအကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်ဖြစ်ပျက်တခုရဲ့ဥပမာ: ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတစ်ဦးမာရီယိုကိုခေါ်ကြပါစို့။ မာရီယိုဝက်ခြံသို့မဟုတ်ဝက်ခြံခံစားခဲ့ရဘယ်တော့မှပေမယ့်တဦးတည်းအချိန်ကသူတို့ရှိခဲ့သည်။ ထိုသူတို့ကပျောက်မသွားခဲ့ပါဘူး။ မာရီယို, အဘွားအိမ်မှာကုစားရှိမရှိဆေးဆိုင်ကနေဆေးဆိုင်သို့မဟုတ်အထူးရန်ပုံငွေထဲကနေလူကြိုက်များတဲ့ထုတ်ကုန်ကြိုးစားခဲ့ဆိုလိုတာကနေပါစေ, ဘာမျှမကူညီပေးခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတော့မာရီယိုသူထံသို့ သွား. , ဒါကြောင့်ပျေါအဘယျလှုပ်ရှားမှုများကိုစားတဲ့အခါမှာသူရှိတယ်အဘယ်အရာကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်ဒိုင်ယာရီစတင်ခဲ့သည်။ သူ၏နောက်ပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့သူဟာကတည်းကအသစ်တစ်ခုကိုကိတ်မုန့်မှာလအနည်းငယ်ကသူ့လူနေမှုနံနက်တိုင်းယူဆောင်တော်မူကြောင်းကိုအထဲကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မာရီယို ...2ရက်သတ္တပတ်များအတွက် Baker ရုံးတင်စစ်ဆေးအခြေခံရှောင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရလဒ်များကိုရှိသနည်း သူတို့နောက်ဆုံးတော့လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိလက်ျာဘက်, အဝက်ခြံပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ အဆိုပါစားတော်ဝန် Mario မတည့်ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်အကျိုးဆက်ဝက်ခြံကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ရာမှမည်သည့်ပစ္စည်းကိုသုံးကြရပေမည်။
ပြီးသားဖော်ပြထားကြောင့်အောင်မြင်စွာတိုက်ထုတ်ရောဂါ၏အကြောင်းရင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နေမကောင်းကလေးများတစ်ဦးထက်ပိုသောအလွန်စိတ်မကောင်း, အဓိကအားဖြင့် wenn ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကလေးသည်ဖြစ်ပါသည်ဘူးကအော်ဟစ်နှင့်သက်သက်ယားယံကုတ်ခြစ်။ : ဤချွေးသိပ်ဖို့ကအနည်းဆုံးကျနော်တို့အတူတကွ5ဟာယားယံသက်သာရာသင့်သောအကြံပေးချက်များ, နှင့်အဖုထားကြပြီ
ကအသံအဖြစ်ဝိရောဓိ: ခြစ်ရာဘူး! ဒါကြောင့်ပြီးသားလူကြီးများအတွက်ခက်ခဲသည်နှင့်သားသမီးတို့အဘို့မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်, သို့သော်ခြစ်တစ်ခုသာအလွန်ကိုခဏများအတွက်နာကျင်မှုသက်သာပေမယ်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ထိကပြန်အကျိုးသက်ရောက်နှင့်အတူပြန်လာပါသည်။ ရင်တောင် တစ်ဦးကသံသရာ!
အနည်းငယ်သောအစွန်အဖျား: ဥပမာအားအိပျပျြောနေချိန်တွင်ညအချိန်တွင်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ခြစ်ရန်, ကတိုတောင်းသည့်လက်သည်းဖြတ်ချည်လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ရန်အသုံးဝင်သည်။
ရှိကြသည်က Black လက်ဖက်ရည်ထုပ်ပိုးပြီး Make နှင့်ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ပေါ်မှာထားပါ။ ဆိုးဆေးအားဖြင့်, ဒီအသားအရေကတီထွင်တဲ့အကာအကွယ်အလွှာသို့ပြန်သွားရန်နှင့်အညီ itching (ခြောက်သွေ့အသားအရေကိုမှတ်မိ!) လျော့နည်းအစိုဓာတ်ကိုရှုံးသည်။
ထိုအခါမုန့်သို့မဟုတ်ရေနံနှင့်အတူပါဆုံးသဘာဝက။ အလွန်ကောင်းစွာအဘိဓါန် Moroccan argan ရေနံအဖြစ်ကဒီမှာကိုက်ညီ။ Argan ဆီယားယံသက်သာခြင်းနှင့်အရေပြား၏အရေးကြီးသောအစိုဓာတ်ကိုပေးသောသဘာဝက antioxidants များနှင့်ဗီတာမင် E ကို၏မြင့်မားသောအကြောင်းအရာနှင့်သဘာဝ, သက်သတ်လွတ်, ဆီဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ argan ရေနံနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ ...
အထက်တိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အမျှတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှအကြောင်းမရှိအခြားသူတွေစိတ်ဖိစီးမှုများတို့တွင်အဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အပန်းဖြေလေ့ကျင့်ခန်းကသင်၏သုခချမ်းသာကိုတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ဤအရပ်ပုယားယံမှသက်သာရာရစေရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ညာဘက်ရေချိုးခန်း & ခြောက်သွေ့တဲ့
ရေကို showering သည့်အခါဖွင့်ကိုဖွင့်ဒီအသားအရေခန်းခြောက်အဖြစ်လွန်းပူပြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအခါတဦးတည်းရဲ့အသားအရေတခုတခုအပေါ်မှာမလိုအပ်တဲ့ strain ကိုရှောင်ရှားဖို့မျက်နှာသုတ်ပုဝါနှင့်အတူအစား DAB, အရေပြားအစားကြမ်းတမ်းခြောက်သွေ့။ ဒါဟာအစိုဓာတ်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်မုန့်လျှောက်ထားရန်ထပ်မံအရေပြားကဒီမှာအရေးကြီးပါသည်။
မုန်တိုင်းကာလအတွင်းမှန်ကန်သောအပြုအမူ | ကလေးများ